Lola Tigraay: Gamtaan Afrikaa jiddu galee araara akka buusu naannoon Tigraay gaafate – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsLola Tigraay: Gamtaan Afrikaa jiddu galee araara akka buusu naannoon Tigraay gaafate
Konkolaataa Raayyaa Ittisaa humni addaa Tigraay naannoo Maqaleetti itti dhimma bahaa jiru
Pireezidantiin naannoo Tigraay Dabratsiyoon Gabramikaa’el Gamtaan Afrikaa lola naannichaa fi mootummaa federaalaa jidduu galee araara akka buusu gaafatan.
(bbcafaanoromoo)–Dabratsiyoon Gabra Mikaa’eel (PhD) xalayaa dura taa’aa Gamtaa Afrikaa Siriil Ramafoosaaf erganiin ”rakkoo siyaasaaf waraanni furmaata ta’a jedhee hin amanu,” jedhan.
”Gamtaan Afrikaa dhaabbilee siyaasaa fi kanneen hiree qaban biroos gara marii hunda hammataatti fiduun biyya wal-waraansa (civil war) irraa baraaruuf gaafatama qaba,” jedhan.
Lola dhaabanii mari’achuun gaarii akka ta’ee fi mootummaan isaanii fedha qabaachuu Dabratsiyoon Dilbata Rooyitarsitti himaniiru.
Hanga anga’oonni federaalaa mari’achuuf waliigalaniitti garuu naannichi of ittisuu itti fufa jechuun Dabratsiyoon dubbataniiru.
Xalayaa Jimaata Sadaasa 06 barraa’e kanaan, ”yeroo gabaabaa keessatti rakkoo biyyattii liqimsaa jiruuf fala mariirratti hundaa’e fiduuf gahee keessan ni baatu abdii jedhu qaba,” jedhan Dr Dabratsiyoon.
”MM Abiyyiifi deeggartootni isaanii rakkoo biyyi fi naannichi keessa jiruuf gaafatamoo ta’uu isaanii mootummootni Afrikaa fi dhaabbileen kaan haa beekanis” jedhaniiru.
Lolli kun gara wal-waraansaatti guddatee nageenya biyyoota ollaallee jeequu mala sodaan jedhu yeroo gara yeroo dabalaa jira.
Kana ka’umsa godhachuunis hogganoonni biyyoota addunyaa gara garaa waraanni akka dhaabbatuu fi rakkoon jiru mariin akka furamu dhiibbaa gochuutti jiru.
Miseensonni Koongirasii Ameerikaa kanneen dhiyootti yaaddoo isaanii ibsatan keessaati.
Miseensonni koongirasii torba ibsa Jimaata darbe baasaniin haala Itoophiyaa keessa jiruun yaadda’uu himanii, lolli kun biyyattii nagaa dhabsiisuu fi lammiilee nagaa gaaga’uu mala jedhan.
Kanaafis lolli dhaabbate gara marii biyyaalessaatti akka deemamu waamicha dhiyeessan.
Humna addaa Tigraay, buufata waraana raayya ittisaa izii Kaabaa naannoo Maqalee jiruutti
Haa ta’u malee gama mootummaa federaalaatiin gara mariitti deebi’uuf fedhiin waan jiru hin fakkaatu. MM Abiy ergaa Dilbata Afaan Ingiliziin hawaasa idil addunyaaf dabarsaniin, mootummaan tarkaanfii waraanaa eegale fiixaan ni baasa jedhan. Tarkaanfiin mootummaan fudhataa jiru nagaa waaraa buusuun olaantummaa heeraa kabachiisuuf sochii taasifamu akka ta’ee fi ‘yakka raawwatanii gaafatamuu dhabuun akka hafu akkasumas humnoota biyyattii fi naannicha jeeqan xumura itti gochuuf akka ta’es himaniiru. Amma duras “qaamoleen yakkamtootaa maqaa araaraa fi taa’anii wal marii’achuutiin olaantummaa seeraa jalaa bahuu hin danda’ani” jedhanii turan. Wantoonni haaraan jiran maali? Ajaja MM Abiy Ahimadiin loltooti raayyaa ittisa biyyaa fi humni addaa naannoo Amaaraa humna addaa fi milishaa naannoo Tigraay waliin waraana erga eegalanii guyyooti shan darbanii jiru.
Dhaabbati Biyyoota Gamtoomanii (UN) akka jedhutti ammatti yoo xiqqaate bakkeewwan adda addaa saddeetitti humnoota federaalaa fi naannoo Tigraay jidduutti lolli adeemaa jira. Namoonni miliyoona sagal ta’an lola kanaan balaa qe’ee isaaniirraa buqqa’uuf saaxilamuu malu kan jedhe UN, Tigraay karaa maraanuu karri itti cufamee, qunnamtiinis irraa citee waan jiruuf deeggarsa akki itti qaqqabsiisan hin jiru jedheera. Lola kanaan lakkoofsi namoota du’anii hedduu ta’uu fi haleellaan qilleensarraan raawwatamaa jirus dabalaa jiraachuu gabaasaaleen jiru.
Miseensa Humna Addaa Naannoo Tigraay
Lola gama Lixa Tigraayiin guyyoota darban taasifameen raayyaan ittisa biyyaa injifannoo goonfachaa jiraachuu, direektarri indoktirineeshinii Raayyaa Ittisaa meejar jeneraal Mohaammad Tasammaa Dilbata miidiyaalee biyya keessaaf himaniiru.
Akka isaan jedhanitti raayyaan ittisaa lola kanaan bakkeewwan daangaa naannoo Tigraay keessa jiran akka Maayidallii, Daanshaa, Baa’akar, Lugdii, Qaraaqir akkasumas Aanaa Tsagadee fi naannoo Daanshaa kan jiru buufata xiyyaaraa Humaraa guutummaatti to’annoo jala oolcheera.
Lolli kun cimee kan itti fufu ta’uullee meejar jeneraal Mohaammad himaniiru.
Naannoon Tigraay maal jedhe?
Miseensi koree hoji raawwachiiftuu TPLF Obbo Geetaachoo Raddaa TV ‘Dimtsii Wayyaanee’ jedhamurratti dhiyaachuun akka dubbatanitti, Lixa Tigraayiin lolli jabaan adeemaa jiraachuu himaniiru.
Gama Afaar akkasumas gama Raayyaatiinis mootummaan federaalaa loltoota bakka biraa turan sochoosuun, lola banuuf qophiirra jiraachuu Obbo Geetaachoon dubbataniiru.
Dhimma raayyaan ittisa biyyaa Lixa Tigraayitti bakkeewwan adda addaa to’annoo jala oolchuu ilaalchisee, waanti jedhame dhugaa akka hin taane akeekanii jiru.
Mootummaan kutaalee Tigraay gara garaa keessatti haleellaa qilleensaa gochaa turuu kan himan Obbo Geetaachoon, guyyaa kaleessaa [Dilbata Sadaasa 09, 2020] xiyyaarri waraanaa tokko naannoo Maqaleetti humna naannichaan rukutamtee kufuu himaniiru.
Naannichi buufatawwan xiyyaaraa xiyyaaronni waraanaa kun irraa ka’an osoo hin hafin haleeluu akka danda’us Obbo Geetaachoon dubbataniiru.
Raayyaan Ittisa biyyaa xiyyaarri waraanaa rukutamee kufe hin jiru, humni qilleensaa ammallee bakkeewwan filataman haleelaa jira jechuun dubbii kanaan soba jedheera.
OMN: Waraana Naannoo Tigraayii fi Egeree Oromoo